Ọ bụ nnukwu ọgbakọ na nkwuwa okwu dara ụda dịka ndị obodo Akwaeze nke steeti Anambra, ma ọ nọ n'ụzọ ma ọ nọ n'ọhịa nuputara n'igwè ma were otu olu gosipụta hoohaa na ha kwụ aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ n'azụ na nhọpụta ahụ a ga-eme nso nso a.
Mmemme ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ama egwurrgwu ụlọ ụka St. Maịkeelụ (katọliki) dị n'Akwaeze n'okpuru ọchịchị Anaọcha bụ nke a kwadòrò site n'aka onye enyemaka.
pụrụ iche nye gọvanọ n'ihe gbasaaraa ndọrọndọrọ ọhịchị bụ maazị Olisa Ọnwụatụegwu.
Ka ọ na-agwa igwe mmadụ bịara mmemme ahụ okwu, ya bụ onye enyemaka ahụ pụrụ iche mere ka a mara na n'ịgbakwụnye inye ọtụtụ ụmụafọ obodo ahụ ọrụ n'ọchịchị ya, na gọvanọ Obianọ emeputago ọtụtụ ihe dị iche iche a hụrụ anya n'obodo ahụ, ọbụnadị tinyekwuoro nde Naịra iri anọ o nyere ha ka ha wee họrọ ma rụọ ihe ha chọrọ.
MaazṅOlisa rịọzịrị igwe mmadụ ahụ ka ha chekwaba akwụkwọ ikike ha, n'ihi na ọ bụ naanị site na ya, ka ha pụrụ ịtụnyere gọvanọ Obianọ nke ka ọ chịa ugboro abụọ, ma rịọkwazie ha ka ha kwụghachi ya bụ gọvanọ ọrụ ọma dị iche iche ọ rụgooro ha site n'ịtụnyere ya akwụkwọ n'izugbe na nhọpụta ahụ a ga-eme n'abalị iri na asatọ nke ọnwa a. Ọ dụrụ ndị ntorobịa ka ha ghara ikwe ka mmadụ ọbụla were ha sunye ọgba aghara ma ọ bụ mere ndị akpụ obi na nhọpụta ahụ n'ihi na nke ahụ pụrụ igbu ọganihu ha ma ọ bụ wetere ha ọnwụ erughị eru.
N'okwu ya, onyeisi nchere oge n'okpuru ọchịchị Anaọcha bụ maazị Ikeobi Ejiọfọ dụrụ igwe mmadụ ahụ ka ha gbaa mbọ chekwaba akwụkwọ ha tụrụ atụ ụbọchị ahụ, iji hụ na mmadụ ọbụla egwughị ojoro.
N'aka nke ya, eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Christopher Ọkpala, onye kwuru okwu site n'ọnụ ode akwụkwọ ukwu n'obi eze, bụ maasị Pius Mbanefo mere ka a mara na otu pati APGA agaghị ada ada n'obodo ahụ, ma rịọkwazie ndị e ji okwu ha agba izu n'obodo ahụ ka gbakwa mbọ hụ na e chekwabara akwụkwọ ha tụrụ atụ ụbọchị ahụ, ngwa ngwa e bupuru ha n'obodo ahụ.
Na ntụnye nke ha n'otu n'otu, onyeisi oche otu pati APGA na mpaghara Anambra Sentra bụ maazị Theophine Nnọlị na onyeisi oche pati ahụ n'okpuru ọchịchị Anaọcha, bụ Ọkaiwu Ndụbụisi Obiadị kọwara otu pati ahụ dịka e jiri mara ndị Igbo, ma rịọ ndị ahụ ka ha gaa n'ihu na-agbasa oziọma banyere ọrụ ọma dị iche iche ọchịchị nọ ugbu a rụpụtagoro na mpaghara niile nke obodo ahụ, ọbụnadị dịka ha kweworo nka ịtụnyere ha n'izugbe.